Musiki wePython achashandira Microsoft gore mushure mekurega basa | Linux Vakapindwa muropa
Musiki wePython chirongwa chemutauro, Guido van Rossum, akazivisa pachena chiziviso chesarudzo yake yekurega basa rake. Kubvira ikozvino zvichienda mberi, chichava chikamu cheMicrosoft's Development Division.
Python Iyo ndeimwe yemitauro inozivikanwa kwazvo yekuronga sezvo inogona kushandiswa kudzidza zvirongwa, zvekugadzirwa kwezvakawanda-chinangwa kana zvakanangwa-chinangwa zvinoshandiswa senge komputa yesainzi. uye iyo Internet yezvinhu. Microsoft yakanga yatobhadhara mugadziri wemamwe emapulagi ayo anowedzera ruzivo rwePython achishandisa Visual Studio Code. Iko kune kutofungidzira kuti Python ndiyo yeramangwana mutauro wekunyora muMicrosoft Excel.
1 Chii chichagadzirwa nemusiki wePython kuMicrosoft?
2 Yakakosha yekugumburwa. Ndedzipi dzimwe nzira dziripo kuPython
Chii chichagadzirwa nemusiki wePython kuMicrosoft?
Basa raVan Rossum kusvika muna Gumiguru gore rapfuura raive kukambani yeDropbox, kwaakagara kwemakore matanhatu nehafu. Basa rake kuMicrosoft, zvinoenderana nezvakataurwa naVan Rossum iye, Ichave iine "kugadzirisa mashandisirwo ePython zvakachengeteka (uye kwete paWindows chete."
Microsoft haina kutaurawo zvimwe zvakawanda nezve iro basa rayo. Izvo zvavakataura zvaive:
Isu tinofara kuva newe sechikamu cheDevelopment Division. Microsoft yakazvipira kupa uye kukura nenharaunda yePython, uye kuwedzerwa kweGuido chiratidzo chekuzvipira ikoko.
Akazvarwa muHolland, akatanga kushanda mukusimudzira mutauro muna 1989. Akaenderera achishanda nesimba pamutauro panguva yake kuUS National Institute of Standards uye Technology pakati pe90s uye kumakambani akasiyana kubva ipapo, kusanganisira semutungamiriri wePythonLabs kuBeOpen neZope uye kuElemental Security. Asati ashandirwa naDropbox, aishandira Google kubva 2005 kusvika 2012. Ikoko, akagadzira iyo Mondrian yemukati kodhi yekuongorora chishandiso uye akashanda paApp Injini.
Yakakosha yekugumburwa. Ndedzipi dzimwe nzira dziripo kuPython
Guido van Rossum akange aramba chinzvimbo chake se "anobatsira mudzvanyiriri" wemhedzisiro yePython kuvandudza. uye chirongwa ichi chinoramba chichienderera zvisinei nezvaanoita kana zvaasingaite. Asi isu tinoziva kuti mune yakavhurika sosi yenyika kune vanhu vakasimba kwazvo mukutenda kwavo (maTaliban akataurwa newe, kwete ini) vanoda kuratidza kuramba kwavo kiyi yakavhurika sosi yemunhu anotendeukira kudivi rerima.
Kwavari tichaenda kunonyora mimwe mimwe mitauro yekuronga
Munguva pfupi yapfuura yakadzingwa naPython semutauro unonyanya kufarirwa wechirongwa, Java mutauro wekuronga uye chikuva chekuuraya icho chinovakirwa pafilosofi inotevera:
Shandisa iyo-yakatarisana nechirongwa chirongwa paradigm.
Iyo inobvumidza kuitiswa kwezvirongwa pane akawanda masisitimu anoshanda.
Iyo ine rutsigiro rwekutengesa mitambo.
Ita kodhi pane ari kure masisitimu zvakachengeteka.
Zviri nyore kushandisa.
Java inoda kuiswa kwemuchina chaiwo uyen iyo inomiririra komputa kuti ikwanise kushandisa zvirongwa
Icho chinonyanya kushandiswa chirongwa chirongwa muminda yesainzi komputa, muchina kudzidza, zvemari masvomhu, biomedical tsvagiridzo, uye bioinformatics. Iyo ine maraibhurari anokupa iwe akawanda mikana yekuverenga uye graphing
SaPython nevamwe vese vatataura, Julia ndeye yakavhurwa sosi programming mutauro. Kunyangwe ichigona kushandiswa mukugadzira zvese, yaive yakagadzirirwa pamwe nezvinodiwa zvevashandisi vehuwandu uye vesainzi mupfungwa.
Uyu mutauro wehurongwa unosanganisira maficha emimwe mitauro yechinyakare yakadai sePython, Ada naModula uye inogona kushandiswa kuburitsa muchinjika-chikuva zvinoshandiswa izvo zvisingade muchina chaiwo kumhanya.
Yakanakira kushushikana, ichi chihombe chinangwa chirongwa chemutauro chine zvinyorwa zvinoverengwa muhafu yeawa uye zvinounganidzwa kune mabhinari ayo asingade chero kutsamira kumhanya pane chero sisitimu yekushandisa.
Mifungo yakafanana nemhino, munhu wese ane imwe. Kana mumwe munhu asingade kutenda kuti Microsoft yakachinja maitiro ayo kune yakavhurika sosi, ivo vane kodzero. Asi, kubva ipapo kuti uzvibvise iwe pachako nekushandisa mitauro yakawanda, yakawanda yemapuratifomu nemaraibhurari ayo anoitendera kuti ishandiswe kune chero kushandiswa kwekufungidzira nekuti musiki wayo anoshandira kambani iyi, hazvina musoro. Pasina kupokana, chinzvimbo chakanakisa chePython ndiPython.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Python musiki achashandira Microsoft